Kedu ihe a na-akpọ otu igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Otu igwe kwụ otu ebe - nkọwapụta zuru ezu
Otu igwe kwụ otu ebe - nkọwapụta zuru ezu
Kedu ihe a na-akpọ otu igwe kwụ otu ebe?
Na agba ịnyịnya ígwè n'okporo ụzọ, peloton (site na French, nke pụtara 'platoon') bụ isiotuma ọ bụ mkpọ nke ndị na-agba ịnyịnya. Ndị na-agba ịnyịnya na aotuchekwaa ike site na ịnya nso (drafting ma ọ bụ sllipstreaming) ka (karịsịa n'azụ) ọzọ agba.
Mgbe anyị na-apụ n’ịnyịnya ígwè anyị ma na-aga n’okporo ụzọ ghere oghe, anyị na-aghọ akụkụ nke okporo ụzọ, yabụ ọ dị mkpa ka anyị mụta iso ndị na-eme njem na-emekọrịta ihe n’ụzọ dabara adaba ma na-agbanwe agbanwe. Ee na akara aka bụ otu n’ime ngwa ọrụ anyị nwere nkasi obi iji bụrụ ọkwọ ụgbọ ala nwere nka ma echegbula onwe gị n’ihi na anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ịmụ na ime ihe, nri mana tupu anyị mee nke ahụ, ọ bụ oge ịjụ ngwa gcn maara ihe m ga-eme votu ọ ga-agafe ya na ngwa gcn oh ọ dịghị mgbe ị ga-eme ya ka anyị ga-aga n'ihu ịchụ nta ahụ n'agbanyeghị na ị na-agba naanị gị ma ọ bụ na otu ndị ị ga-aga na Iji nwee ike ikwurịta okwu n'ụzọ nke ọma ndị ọrụ m na-ekwu, ọ bụrụ na ụgbọ ala ga-atụgharị na-enweghị egosi na ị nwere ihe ị ga-ekwu, ọ bụrụ na ị gaghị eme ya, ọ bụrụ na ịnyaghị ụgbọ ala mgbe ahụ ị nwere ike ọ gaghị ama nke ọma na okwu nrịba ama enyo na-ekwupụta iwu ahụ Onye na-agba ịnyịnya kwesịrị ibugoro n'ezie, n'okporo ụzọ ghere oghe, ndị na-anya ya ga na-ele enyo ha, ọtụtụ igwe anaghị enwe enyo. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike iji akara ubu dochie nke a.
Lelee na o doro anya, ị na-egosi usoro ị chọrọ ịrụ wee wee malite na ihe nwere ike ịbụ akara ngosi dị mfe maka ntụgharị ị ga-eche maka ụzọ ahụ tupu nkwụsịtụ, ọ daberekwa n'ụdị ụzọ ị nọ ọ bụrụ na ọ bụ ụbọchị na-ekwo ekwo na e nwere ọtụtụ okporo ụzọ, ịchọrọ igbu ihe niile ndị ọrụ okporo ụzọ a maara nke ọma ihe ha na-eme tupu ụzọ ahụ agaa ma ọ bụrụ na ọ dị ezigbo anya, ịnwere ike ịhapụ ha nso nso ụzọ a ga-ebu ụzọ lelee ubu gị na ụgbọala ogologo n'ihu iji jide n'aka na ọ bụ doro anya, mgbe ahụ mgbaàmà na ogwe aka gị n'ụzọ zuru ezu gbatịrị mgbe m chọrọ ileghachi gị ubu ọzọ iji jide n'aka na ọ dịghị onye na-achụ gị, akpali n'ime n'etiti uzo na na-na-na-egosi ihe ọzọ bara uru na-eche echiche banyere ọnọdụ nke okporo ụzọ Mgbe ị nọ n'ụzọ warawara, ị ga-anọ n'ọnọdụ mara mma nke ọma n'etiti okporo ụzọ a na-enye gị ụzọ mara mma gaa ebe ọzọ ọ dịkwa mma iche echiche tupu ị gawa nrutu na ele anya gburugburu iji jide n’aka na odighi ihe ichotara ma o nweghi ihe obula gha ju gi anya ma otua ka o gha adi gi na uzo kwesiri ka i lee anya n’ubu gi. ị ihe ị ga-eme mgbe ị nọ ebe ahụ nwere ike ịnwe ihe mgbochi n'ihu gị ma ọ bụ na ị ga-ebelata ọsọ gị mgbe ahụ mgbaàmà nwayọ nwere ike ịba uru naanị ị ga-agbatị ogwe aka gị n'akụkụ ma mee ka ọ gbadaa nwayọ nwayọ hankyou dị ka ị na-achọ ịpụ, ọ bụ nnụnụ, enwere nkwụsị na-eme ka onye ọ bụla mara na ị na-akwụsị ịkwụsị bụ nke kachasị mkpa, ọkachasị mgbe ọ bụ ya mere ugbu a ọ bụ maka ịnya otu ma ọ bụ otu enyi Enwere ụzọ abụọ iji mee nke a, ịnwere ike itinye ogwe aka gị otu a, ma ọ bụ ịnwere ike itinye aka gị n'azụ gị. Ugbu a ọ na-arụ ọrụ kachasị mma mgbe ị na-agba otu nnukwu ìgwè, n'ụzọ ahụ onye ọ bụla nwere ike ịhụ ihe ị na-eme na mgbe yana gị na enyi gị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ọkachasị mgbe mmadụ nọ na igwe kwụ otu ebe gị ịnwere ike iji ihe ngosi nke aka n'azụ gị, nke a bu akara aka zuru oke, agbanyeghị na enweghi m enyi igosiputa ma gi mara mu na gi ma ma nke ahu di nkpa n'ezie bu na otu a mara na i na egosi ma obu ihe ị na eme tupu ịmalite imebi ihe ikpe azu ichoro ọ bụ onye ọ bụla na-aga azụ ị chọghị na ugbu a ị nwere ike ịnọ na-eche ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkwụsị mberede na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ aka, ihe niile ị ga - eme, bụ iji olu gị mee ihe m pụtara na nke a bụ ihe a na - anabata nke ọma na ọ bụ ọ dị mma ma daa ụda ma dị mma ma doo anya na ọ dị mma ọrụ na-ekele gị ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na otu ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ígwè ọ dị mma c Mee ka ị na-atụtụ aka dịka olulu ma ọ bụ ihe mgbochi n'okporo ụzọ. Ihe ị ga - eme bụ igosipụta aka ma ọ bụ itinye aka na oghere ndị otu ahụ niile maara ebe ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị oge igosi ya mgbe ahụ ihe niile ị ga - eme bụ iji olu gị, yabụ gị nwere ike ikwu olulu n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ ihe mgbochi n'aka nri ka onye ọ bụla mara ebe ọ dị ka ha wee nwee ike izere ya Ezi uche na-eche ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala n'azụ ya, olee otu ọ ga-esi metụta ha na ihe ị ga-achọ ime mara otu esi enweta Ebe ahụ? Eeh, ị nwere ike ghara ịkpọ mkpu ihe niile m na-ekwu, ka emechara, anyị nọ n'ime obodo Welsh, anyị achọghị ịtụ ndị atụrụ ọ bụla n'anya? mgbe ụfọdụ anyị na-enweta atụrụ n'okporo ụzọ, ị kwesịrị ịgwa ha na anyị kwesịrị ịdị mma n'okporo ụzọ a, ịgafe ụgbọala ndị a dọwara ụgbọ ma ọ bụ ịpụ n'okporo ụzọ iji zere ihe mgbochi chọrọ n'ọtụtụ njem iji gosipụta ihe na-abịa n'azụ gị. ga-ebugharị ogwe aka gị azụ gaa obe ịchọrọ igosi aka nri gị n'aka ekpe na ogwe aka ekpe gị gaa n'akụkụ aka nri ị gafere ubu gị ma gwa ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ na ị chọghị ịnwe gị n'oge ngagharị a ala ma ọ bụ nkwụsị dị mkpa ugbu a mgbe ị na-akwọ ụgbọala n'otu ìgwè.
Ugbu a, isi bụ inweta akara site na otu niile ka onye ọ bụla mara nke ọma ihe na-eme. Ya mere ọ bụrụ n'ịhụ onye ọkwọ ụgbọ ala n'ihu gị idetuo ihe mgbaàmà a ka ọ gafere site na otu ahụ ma onye ọ bụla maara ebe ha na-aga ma ọ na-emekwa ka ọ dị mma ma dịkwa mma n'ezie ọmarịcha akara ngosi hey nwoke ebe anyị na-aga aka nri anyị na ụgbọ ala ndị ọzọ n'okporo ụzọ ma ọ bụrụ na ha chere n'azụ anyị ka anyị kwuo na daalụ otu mkpịsị aka ukwu mmelite na-aga ogologo ụzọ m chere kpatara gịnị ji amalite site na nke ahụ bụ njedebe nke isiokwu a. Enwere m olileanya na ị nwere mmasị na edemede a yana ị hụ ụfọdụ n'ime usoro ndị a bara uru ma nwee ike iji ha n'okporo ámá, ọkachasị nke a, anyị na-aga n'ụzọ ziri ezi, ee n'ezie ee, ị gaghị amata ihe mere akara ngosi a na nke ahụ bụ blob doro anya na ọ bụghị na ụmụaka m chere na nke a bụ bụghị nnọọ uru na n'okporo ámá
Kedu otu m ga-esi chọta otu ịgba ịnyịnya ígwè?
Leleepụọ na Instagram wee pịa ebe ị na-agbagoleeonye ọzọ na-agba ịnyịnya ebe ahụ. Chọọ peeji Facebook ma ọ bụìgwèn'ógbè gị kwa — mgbe mgbe, ọ na-enwe ma ọ dịkarịa ala otu onye raara onwe ya nyeịgba ígwèpeeji nke ọtụtụ obodo, ị nwere ike ịme atụmatụ ma ọ bụ wụbata na yaotuna-agbago n'ụzọ ahụ.Ọkt 16 2017
Kedu ka m ga-esi sonye na klọb okirikiri?
Kpaa nkata na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ka ị hụ ma ha nwereklọbma ọ bụ ọ bụrụ na aklọbna-eji ụlọ ahịa ha dị ka ebe ọpụpụklọbna-agba ịnyịnya. Mgbe ahụ jụọsonyeotu n'ime ndị na-agba ịnyịnya ka nwalee ya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ndị enyi gị na-agba ịnyịnya bụ nke aklọb, lee ma ị ga-eji tinye n’otu n’ime haklọbna-agba ịnyịnya.Ọgọst 17 2019
Ya mere, ị nwere igwe kwụ otu ebe na ị hụrụ n'anya ịga ngwa ngwa. You chọrọ ịma ka esi abanye n’ọsọ? Ma eleghị anya, ị na-enweta KOM ma ọ bụ QOM oge ọ bụla ị gafere ụgbọala anyị, ma ọ bụ naanị ị na-egwu ndị enyi gị niile ma eleghị anya na-eche na ị ga-adị mma na ya. (egwu electronic) Emere m ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè mbụ m mgbe m bụ 22.
Nke ahụ emeela ochie ugbu a maka usoro ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara, ebe ọtụtụ mmadụ na-amalite dị ka ndị okenye wee rụọ ọrụ n'ụzọ ha. Ọ ga-ekwe omume ịmalite ịgba ọsọ n'oge ọ bụla. May nwere ike ịmeghị ka ọ bụrụ pro, mana ị nwere ike ị gaghị ama ma ọ bụrụ na ịnwale.
Enwere ụfọdụ ihe atụ nke ndị ọkachamara na-etinye aka na egwuregwu ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ Kristin Armstrong, bụ onye mere 20 triathlons site na njedebe nke 20 ma merie akara ọla edo atọ na Olympic, nke na-adịghị njọ. Ihe mbụ ị ga-atụle bụ ụdị agbụrụ ị ga-achọ ịgba? Ọ bụrụ na ọ bụ ịgba ọsọ n'okporo ámá? , nke ọma, nke kachasị elu bụ ihe ị na-ahụ na TV na World Tour, Tour de France na The Olympic Road Race dịka ọmụmaatụ. Nke a mara ezigbo mma, mana enwere agbụrụ mba na agbụrụ mpaghara, yabụ gbaa mbọ nwalee nke a.
Enwere njirisi, agbụrụ agbụrụ mpaghara na agbụrụ igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịnwale. Enwekwara ndị Sporteves na-enweghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ Grand Fundos, nke bụ mmemme mmalite mmalite nke enwere ike ịme na mpaghara ma ọ bụ tere aka na ọnọdụ ndị ọzọ. Enwere uwe elu egwuregwu otu ụbọchị na ọtụtụ ụbọchị, ha nwekwara ike ịbụ ezigbo ihe ọchị na asọmpi.
Ọsọ abụghị ihe gị, gịnị ma ị nwalee oge ikpe ebe ị na-agba otu otu na elekere ma n'eziokwu na-eche ọtụtụ ụjọ. Y’oburu na ohuru n’agba oso, gini gaghi acho ya? ihe niile ma hụ ihe kachasị amasị gị? Chetakwa, Grand Fundos ma ọ bụ Sporteves bụ ụzọ na-atọ ụtọ nke ukwuu iji nweta asọmpi na mkpali nke ịgba ọsọ na-enweghị ịzụta ikike. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ịgba ọsọ n'okporo ụzọ, usoro ọzọ bụ ịzụta ikikere ma ọ bụ ikikere ụbọchị ma nye ihe omume nkewapụta nke kachasị dị ala, mana ọ bụrụ na ị mee nke ọma, ị ga-enweta isi ihe ga - enyere gị aka ịkwalite edemede ahụ ma mesịa nweta chọpụtara Tụkwasị m obi, ọ dịghị onye na-aga site na nnukwu ọrụ ma ọ bụ COM na ọganihu na-aga n'ihu na nkwekọrịta nkwekọrịta, ọ na-ewe oge ma ọ na-ewe ahụmịhe. Ndụmọdụ m kachasị mma ga-abụ ịbanye na klọb.
Karịsịa n'ihi na ndị mmadụ dị mma, mana kwa, ị ga-amụta ọtụtụ ihe site na di na nwunye ndị nwere ike ịnwekwu ahụmịhe n'ịgba ọsọ, kesaa ohere ịgba ọsọ, ha ga-eme gị obi ụtọ mgbe ụbọchị adịghị mma, ha ga-emekwa gị obi ụtọ na ikpo okwu, mgbe i meriri n’ọsọ. N’ezie, ndị ị na-ahụ n’ụzọ ga-abụ ndị dị mkpa dị mkpa n’ọgwụgwụ karịa agbụrụ ndị i meriri ma ọ bụ ndị i meriri. Emeela m agbụrụ abụọ ma kwuo na ndị enyi m nwetara site na ịgba ịnyịnya bụ ụzọ dị m mkpa karịa nrite ọ bụla m nwetagoro, ịgba ọsọ pụtara na ọ ga-abụrịrị na ị ga-amụta ụfọdụ ọrụ ọhụụ niile nke gị Lethapụ ndị enyi n’ugwu, ma ọ bụghị otu ihe ahụ dị ka mmeri ọgba tum tum.
Nke mbụ, ị ga-amụta ịwakpo kama ị na-agba ịnyịnya mgbe niile. Nke abuo, i ghaghi imuta usoro, nke bu ihe siri ike n’agba oso. Nke atọ, ị ga-amụta ịkwọ ụgbọala yana otu egwuregwu, ịmekọ ihe ọnụ dị ezigbo mkpa n'ịgba ọsọ n'okporo ụzọ.
Ihe ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba mgba mgbe ha malitere ịgba ọsọ n'okporo ụzọ dị ka ịnya na peloton bụ n'ezie ihe siri ike nye m. Have ga-amụta nkà ịgba ịnyịnya ole na ole ma ọ bụrụ na ịnweghị ha, ị ga-adị njikere maka ọdịda n'ihi na m na-atụ ụjọ na ọtụtụ agbụrụ igwe kwụ otu ebe dị ugbu a wee jikọọ na ihe ọghọm. Echere m na ọ dị mkpa ikwu n'oge a na ụfọdụ mgbochiume ị nwere ike ịbịarute n'ụzọ bụ agbụrụ.
Ọfọn, achọghị m ịda ka onye na-apụnara mmadụ ihe, mana ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-adị ire ụtọ. Maka ndị na - ebido ebido, dịka m kwuru, naanị maka inwere ike dị ukwuu, nke ọma, nke ahụ apụtaghị na ị ga - emerịrị agbụrụ agbụrụ ọ bụla. Nwere ike ijidesi ya ike nwa oge iji mụta ụzọ esi arụ ọrụ na ịrụkọ ọrụ ọnụ tupu ị merie.
Mgbe ahụ enwere iwu mgbe niile ịlaghachi azụ. Ga-enwe mmetụ buru ibu n'ezie ka ị na-amụta ka ị na-akawanye mma, mmelite ahụ ga-ada mbà ka ị na-akawanye mma. Mgbe ahụ n'ezie enwere ohere dị egwu nke ọdịda na ọrịa nke ga-eme ka ị laghachi.
Echere na nke a anaghị eme gị, mana dị njikere mgbe ọ bụla na ọ na-atọ gị ụtọ ịnya igwe ma na-aga n'ihu ma ghara ịhapụ gị, mgbe ị ruru ọkwa ụfọdụ ịkwesịrị ịnọ na otu mana kedu otu ị si ahọrọ otu Otu pụọ? N’ezie, ị na-ahọrọ ndị otu ka ọ bụ ha na-ahọrọ gị? Ọ bụ ezie na ịnwe igwe kwụ otu ebe na ngwa dị mma nke ukwuu, nke ahụ ekwesịghị ịbụ isi ihe ị ga-atụle naanị oge m họọrọ ya. Otu uche bụ na ha enweghị igwe kwụ otu ebe dabara adaba m na Onsider bụ na ọ bụrụ na ị were okporo ụzọ ịgba ọsọ n'okporo ụzọ ma mara ezigbo mma, ị nwere ike ịnọ ọtụtụ oge pụọ n'ụlọ, na-eme njem na ịgba ọsọ na ịgba ọsọ. Ọ bụghị agbụrụ ndị a niile ga-abụ agbụrụ ị chọrọ ịgba ọsọ. Ha ga-abụ agbụrụ ị ga-agba iji nyere ndị otu gị ma ọ bụ ndị otu gị aka.
Nke ahụ dịkwa mma n’ihi na ịrụkọ ọrụ ọnụ bụ akụkụ dị mkpa nke ịgba ịnyịnya ígwè, mana ọ bụrụ n’ịgba ọsọ dị larịị na Holland na ịmasịghị agbụrụ dị larịị, ma ọ bụ ịrị ugwu na Pyrenees ma ọ bụrụ na ịchọọ agbụrụ dị larịị, cheta na ihe niile bụ akụkụ nke ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ọduọ rataara gị, n'agbanyeghị afọ ole ị dị, mgbe ahụ ihe niile m nwere ike ikwu bụ n'ezie, gbalịa gbalịa. Ga-enwe ọtụtụ ihe ọ funụ, ị ga-ahụ ndị ukwu ma ha ga-ama ebe ị ga-agwụ? Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ịgba ọsọ, hapụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru ma anyị ga-eme ike anyị niile ịza ha.
Nye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otu isiokwu nke otu ị ga-esi merie onwe gị na Strava, pịa ebe a iji hụ otu esi enweta Strava KOMs.
Gịnị ka ọ pụtara mgbe ndị igwe kwụ otu ebe tụpụrụ mkpịsị aka abụọ?
Ọtụtụ mgbe mgbe aọgba tum tumOnye na-agba ịnyịnya na-agba na-abụghị ụzọ,na-atụ aka mkpịsị aka abụọbụ nanị ụzọ isi kwuo “hey” na ndị ọzọndị ọgba tum tum.
JAMIE ROBINSON: Anyị na Wes na Harlan nọ na Los Angeles, anyị ga-akọwara gị ihe kpatara ịkesa ọgba tum tum bụ ihe dị mma. Nabata na RideApart. Wes, ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala nwere anya.
Egbaala m ọgba tum tum n’ụwa niile. 'Ve na-agba ịnyịnya na steeti dị iche iche ebe a na America ebe ị nwere ike kewaa ụzọ. Ugbu a ị nọ na California, ị nweghị ike mgbe ị nọ na New York.
Olee ihe i chere banyere nke ahụ? WES SILER: know mara, oge mbụ m kewara ụzọ bụ n’oge m na-amụ ihe mbụ na London mgbe m dị afọ 16. Oge izizi m jere igwe kwụ otu ebe n’okporo ámá. Ha tụbara anyị na obere 125 cc ahụ ha dịkwa ka ị na-aga ebe a.
Nke a bụ okporo ụzọ. Nke a bụ etiti London. Ya mere, anyị pụrụ, pụọ n'ebe a na-adọba ụgbọala, kwụba ụgbọala.
Anyị mere ya. Ya mere, anaghị m ekewaa ụzọ, nke ahụ bụ okwu gbasara iwu mgbe ụfọdụ, mana ọ bụ etu igwe ọgba tum tum si arụ ọrụ. JAMIE ROBINSON: talk na-ekwu maka nsogbu gbasara iwu na America r Europe anyị nwere ike kewaa ụzọ.
ES SILER: N’ụwa nile, ụzọ ụgbọ okporo ụzọ dị n’usoro bụ nke iwu kwadoro ma kwalite n’ihi na ọ bụ ihe nchekwa na akụnụba ime. Nke a bụ otú ọgba tum tum na-esi abanye. Ma iwu megidere na 49 steeti na-abụghị California, ndị uwe ojii ga-etikwa gị ezigbo ihe.
M nwere a ikpo nke aghara tiketi dị ka nke a site na mgbe m bi na New York. Ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime aghara. Ihe niile kwụsịrị okporo ụzọ, gaa n'elu akara okporo ụzọ, ihe kwesịrị ekwesị, ihe kwesịrị ekwesị maka ndị ọzọ, yana maka ihe ụfọdụ, steeti 49 ndị a kpọrọ ya asị.
JAMIE ROBINSON: Ọ dị mma, Harlan, ị gbara ịnyịnya na Philly ma ugbu a ị nọ ebe a na California. Yabụ ị nwetara ya n'ezie? ọ dịkwa na steeti. Kedu ka mgbanwe gị siri bụrụ gị? AKWANKWỌ HARLAN: Ee, ọ dị mma, na-anya ụgbọ ala na Filadelfia, na-anaghị ekere òkè n'okporo ụzọ, anyị were ya ka ihe efu, ịmara? LA, M na-ahụ ndị a niile ọgba tum tum agba site na okporo ụzọ, na ozugbo m na-aghọta na obi iru ala na-eme ya, M ga-enweghị ya ọ bụla dị iche iche ugbu a.
N'ezie ọ bụ naanị ụzọ inyocha LA. JAMIE ROBINSON: Kpomkwem. Amalitere m ịgba ọgba tum tum n'otu obodo na-ekwo ekwo na London.
A sị na m bụ akụkụ nke okporo ụzọ, nke ụgbọ ala, agaraghị m enwe ebe ọ bụla. Ndị na-agagharị agagharị, ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ndị ọgbatumtum na-anya naanị ụgbọala, ụgbọala ndị na-eguzo oge niile. Maka m ọ bụ ihe ijuanya na sistemụ ahụ.
Ọ dị ka ihe dị egwu, mana dịka ị kwuru, ozugbo ịnwale ya ma nwee ahụmịhe n'onwe gị, ọ bụghị nke ahụ na-emenye ụjọ. Ọ dị ka ị na-eme ihe na-adịghị mma. Ọ dị ka onye na-eme ihe ike.
Ọ dị ka ndị ọgbatumtum na-anwa imebi iwu, enwere ohere dị ukwuu ebe ahụ, anyị na-achọkwa ụzọ anyị ugbu a. WES SILER: Mgbe ị miri emi n'ime ụgbọ ala, echedoro ya na gburugburu gị, igwe kwụ otu ebe na-abịa 15 ma ọ bụ 20 mph ọsọ ọsọ, ọ dị ka ọsọ ọsọ, ọ dị ka nke a enweghị oke, ihe dị egwu. Ma ọ nweghị ike ịdị iche.
Ọ bụ ọrụ dị ukwuu. Anyị enweghị mpaghara ọ bụla dara ada na ọgba tum tum. Anyị enweghị nchebe a wuru ewu, yabụ na anyị ga-elebara ya anya n'onwe anyị, nke na-enye anyị ohere ịchịkwa mmekọrịta anyị na ụgbọ ala.
Nke a na-enye anyị ohere ịchịkwa gburugburu ebe obibi anyị. Ọ bụkwa njikwa a na-enye anyị nchekwa mgbe anyị enweghị ogige niile gburugburu anyị. Ogologo ụgbọ ala anyị sara mbara dị ka ubu anyị kachasị dị, ọ bụghị ya? Kedu ihe nke ahụ bụ - ụkwụ abụọ, ụkwụ atọ? Ma ọ bụrụhaala na ị dị mma n’ogologo ụkwụ anọ ma ọ bụ ise n’obosara, kedu ihe ohere dị n’etiti ọtụtụ larịị, nke ahụ ezuola, ma ọ dị mma.
Naanị ọtụtụ nchekwa. Mgbe ahụ, n'agbanyeghị etu anyị si nọrọ elu igwe kwụ otu ebe, echiche anyị doro anya na ọ dị mfe ịhụ mgbe ụgbọ ala gbanwere. N'ihi ya, ọ bụghị aghara aghara nke-achịkwa, ọ bụghị dị ize ndụ.
Ọ bụ ihe okike ma na ị chịkwaa ya, ọ bụ ezigbo nchekwa. JAMIE ROBINSON: Na njedebe nke ụbọchị anyị na-achịkwa. Ọ bụrụ na ihe ọghọm eme n’ihi na onye ọkwọ ụgbọ na-enweghị isi nwere ihe ọghọm, anyị ga-eburu ibu ọrụ maka ya n’ihi na anyị na-anọdụ n’elu ọgba tum tum.
N’ezie, atụghị m anya na ụfọdụ ihe karịrị ike anyị, mana anyị ga adị nkwadobe. WES SILER: Mgbe m bara n’elu ọgba tum tum, m na-eji ndụ m n’aka m. Nke a bụ mkpebi m na-eme site n'ịgba ọgba tum tum, ọ bụghị ịkwọ ụgbọala SUV dị mma, buru ibu, nke na-adịghị ize ndụ, yabụ ọbụlagodi na ọmarịcha nwa agbọghọ na-akpakọrịta ndị enyi ya ma gbaba n'ime m, ekwesịrị m ịnakwere na ọ bụ m kpatara, n'ihi na ndụ m dị osisi, ọ bụghị nke ya.
N’ihi ya, ọ bụ ọrụ m ka m hụ na ọ naghị eme, ọbụghị nke ya. O nwere ike ịbụ onye na-anya ụgbọ ala ọjọọ dịka ọ chọrọ. Ọ bụ ọrụ m ka m ghara ịhapụ ya gbaba m.
JAMIE ROBINSON: Dị ka onye na-anya ọgba tum tum, achọpụtakwara m - nke na-esiri m ike mgbe ụfọdụ - mana ị ga-ahapụ ihe ka ọ bụrụ ihe m chọrọ. gaba. WES SILER: Eeh.
I nweghi iwe iwe. JAMIE ROBINSON: Ọ bụrụ na ị iwe n'ihi na ihe na - eme, ọ dị nwute, a ga - ewepụ uche gị kpamkpam, ị ga - enwekwa ihe ọghọm na - aga n'ihu n'ihi na ị ka na-ahụ otu nke ị gabigara.
Yabụ anyị nwere nsogbu niile a, nke ahụ bụ akụkụ nke ihe ọ andụ na ọ joyụ nke ịnya ọgba tum tum, OK. Ya mere, ka anyị pụọ. Ka eme a bit nke track ikpe.
Ka anyị gosipụtakwa ya n'ụzọ ezi uche dị na ya, gosi ka esi eme ya, ma jiri ịnyịnya ígwè na-ekpori ndụ. Kedu maka nke ahụ? WES SILER: Enweghị nsogbu, Jamie. JAMIE ROBINSON: Wes, ị bụ onye nwere mmerụ ahụ Man.
Enweghị okuku? Gịnị ka ọ na-ekwu? Ọ bụ Maazị Crasher. ES SILER: Gaba, gawa.
Enwere ọmụmụ ihe na Belgium ma ha chọpụtara na ọ bụrụ na naanị 10% nke ndị ọkwọ ụgbọala tụgharịrị na ọgba tum tum, Okporo ụzọ niile, mgbochi okporo ụzọ niile ga-ebelata site na 40% n'ozuzu. Yabụ ị nwere ike iche n'echiche na anyị na-akwọ ụgbọala ebe a na LA taa, ọ bụrụ naanị 10% - n'ihi na nke a bụ obodo ọgba tum tum, mana ọbụghị 10% na-akwọ ụgbọala ebe a - ọ bụrụ na 10% gbanwere, 40% pere mpe okporo ụzọ na LA? JAMIE ROBINSON: zingtụnanya. WES SILER: Ọ ga-eru nso taa, ịmara? JAMIE ROBINSON: Ọ ga - adị ka ịlaghachi na 1970.
WES SILER: Ma ọ bụghị ihe dị egwu. Ọ bụ n'ezie odi mfe karịa ọdụ na okporo ụzọ. Nnukwu akwụkwọ nsọ nke ọgba tum tum, ọmụmụ ihe kachasị na ọgba tum tum a na-ahụkarị, bụ akụkọ 1981 Hurt Report.
Ọ chọpụtakwara na ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala kpatara 2/3 nke nsogbu ọgba tum tum, ọ bụghị ọgba tum tum na ọgba tum tum bụ ọdụ. Ọ bụrụ na anyị kwụrụ otu ebe, ụgbọ ala abịa n’azụ anyị - JAMIE ROBINSON: Ọ bụ ọnọdụ dị njọ nye ndị na-anya ọgba tum tum, azụ azụ ga-akwụsị. WES SILER: Anyị enweghị ike ịhụ ya, ọ ga-egbu gị.
Maka na nke ahụ bụ ụgbọ ala buru ibu buru ibu nke na-abịakwute gị wee kụọ gị. Have nwere ụfọdụ akpụkpọ anụ na. Ọ ga-afụ ụfụ.
Na ọgba tum tum, nchekwa gị bụ nke gị. Ma obu ike gi, mmata gi na itinye uchu nke gi na nchekwa gi. Ngalaba nke uzo na-enyere anyi aka ime ka nchedo ahu laghachi n'ime ugbo ala anyi. JAMIE ROBINSON: Ee, kpamkpam.
Dịka ị pụrụ ịhụ, okporo ụzọ meghere ma ị kewaa ụzọ. Ohere ghere oghe. Ma ọbụghị na m na-achọ ha, mana ha na-eme n’okike.
HARGAN FlagG: Ọ dịka ị nwere uzo nke gị. JAMIE ROBINSON: Ee, kpọm kwem. Flag HARLAN: Onye na-anya ọgba tum tum nwere uzo nke ya.
Ọ bụ otu Car ahụ nọ n'ụzọ, ụgbọala ndị ahụ apụghị n'ụzọ, ọ dịkwa mfe, ọ na-emepe ụzọ. Nwere ike ịhụ n’ezie etu esi arụ ọrụ ọfụma maka na ịnwere ike itinye ọgba tum tum n’etiti ụzọ ọ bụla. Carsgbọ ala ndị ọzọ n’okporo ụzọ, a na m ekwu n’otu ndị ahụ ga - eburu ụgbọ ala ndị a niile. WES SILER: Oge ọ bụla onye ọ bụla n’ime anyị gafere ụzọ, ị ga - arụ ọrụ ọsọ ọsọ.
Anyị na-enyere gị aka. Nke ahụ bụ ezigbo ihe. Akpọla anyị asị.
Ngalaba ofgbọ njem na United States mere ọmụmụ na California wee jiri ya tụnyere Texas na Florida, bụ ndị nwere ịnya ụgbọ ala kwa afọ, nwere otu ụdị mmadụ, nri? Mana enweghi uzo ozo di na Texas na Florida. Ọnọdụ abụọ a nwere ọnwụ ọgba tum tum na-egbu 30% dị elu karịa California. Ma nke ahụ abụghị akụkọ ndekọ aha.
Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu, 30% pere mpe anyị na-anwụ n'ihi na ụgbọ ala na-agbafe anyị na California n'ihi na anyị nwere mkpebi ụzọ. JAMIE ROBINSON: Ọzọkwa, ị nwere ike ịgụ n'okporo ámá dị n'ihu anyị n'ezie ma ị nwere ike ịhụ ụgbọ ala na ị nwere ike ịhụ ihe niile gbara gị gburugburu. Na mgbe m nọ n'okporo ụzọ ụgbọ ala na enweghị ike ịhụ onye ọkwọ ụgbọ ala - WES SILER: you're na-egbochi n'ihi na ụgbọ ala ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'ihu gị.
JAMIE ROBINSON: - ọ na - esiri m ike ịhụ ihe na - eme. Na n'ụgbọala anyị enweghị nkasi obi nke shei gbara anyị gburugburu. Ọ bụrụ na anyị adaa, o yikarịrị ka anyị ga-emerụ ahụ mgbe anyị na ụgbọ ọzọ.
Akwọọrọ m ụgbọala na London dị ka gị onwe gị mere. Na soro ikpe ziri ezi, dịka i kwuru, ozugbo site n'ọhịa ule, ị na-eme ya ozugbo. Ọ bụ otú ahụ ka e si zụọ anyị.
Ọ bụghị na ọ dị anyị ka anyị na-eme ihe na-ezighi ezi, ọ bụ naanị nke ahụ. Ma nke ahụ bụ otu ihe n'ofe Europe. Abịara m Asia, ọ bụkwa otu ihe ahụ na Asia - ma eleghị anya karịa, n'eziokwu.
Na-agagharị ebe ọ bụla enwere oghere. Anaghị m ahụ ihe ọghọm ọgba tum tum ọ bụla ma ndị mmadụ na-aga n'ihu. WES SILER: Ma ọgba tum tum bụ ụzọ dị mma iji gafere.
Enwere m ike ịbịaru kilomita 50 ma ọ bụ 55 kwa galọn, nke bụ ihe ihe Toyota Prius na-enweta, nri? Nnukwu ihe dị iche bụ na m na-akwagharị. Anaghị m anọdụ ala belụsọ n'ọkụ uhie. Ọbụna Toyota Prius, ọbụlagodi na ngwakọ ndị ahụ, na-enweta maịl kilomita site na galọn ma ha nọrọ otu ebe.
JAMIE ROBINSON: Echere m, mana ọgba tum tum n’obodo ọ bụla, n’obodo ọ bụla, n’ime obodo ọ bụla, ụzọ dị ukwuu maka njem. Echere m na e nwere ọtụtụ igwe kwụ otu ebe maka nhọrọ ọ bụla ị mere. Ọ bụrụ na ị bụ a COMMUTER, M pụtara, ị na-agba otu ọgba tum tum taa.
Flag HARLAN: Ee. M na-agba ịnyịnya ígwè, ana m agbakwa igwe eletrik kwa ụbọchị. Nke a bụ otu m si esi na ọrụ.
Otu a ka m ji anya ụgbọala m gaa n’ụlọ enyi m nwaanyị. M na-eme ihe m na-eme .ES SILER: Kedụ mgbe ikpeazụ ị zụtara mmanụ gas? HARGAN Flag: know mara, M - WES SILER: Echere m na ọ dị mma na ị ga - eche maka ya.
JAMIE ROBINSON: WES SILER na-ewe m iwe: Ọ bụrụ na ị ga-aga ngosi a lee mgbe ikpeazụ ị zụtara tank mmanụ mmanụ na ego ole ka ị nọrọ na ya? Ma Harlan enweghị ike ịza ajụjụ ahụ. JAMIE ROBINSON: Ezi ihe ọzọ anyị kwesiri ime, kwa, ha anaghị akụzi nke a na klaasị onye nkuzi mbido, ha na-akụzi gbasara braking. WES SILER: Eeh.
Yabụ na ị dị njikere ịzaghachi. JAMIE ROBINSON: Jikere ịzaghachi. WES SILER: Na nkewa nke abụọ.
JAMIE ROBINSON: Kpamkpam. WES SILER: Enweghị oge iji wepụ aka gị na njikwa ahụ wee tinye breeki ihu. Nweghị ike idobe mkpịsị aka gị na-akwụgharị n'elu ihe mkpuchi igwe breeki oge niile, mana maka mkpịsị aka abụọ, zuru ike gaa n'ihu na menụ breeki.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji breeki ihu, ịnwere ike iji ya na-enweghị ịga otu ahụ. JAMIE ROBINSON: Ee, otu mkpịsị aka, mkpịsị aka abụọ, ihe ọ bụla ọ bụ. WES SILER: M na-echekarị ụkwụ aka nri m n’elu lever breve.
M mgbe niile nwere aka ekpe m ekpuchi ipigide ka m nwee ike ngwa ngwa rụọ ipigide mgbe ọ dị mkpa. Na nke ahụ na mberede na-achọ obere obere ọrụ anyị na - eme - ọ bụghị naanị na - akwụsịlata, mana ịgbanwe ụzọ ọsịsọ, ma ọ bụ na - agbachi ihe ọ bụla, ihe ọ bụla ọ bụ - ọ na - enyere gị aka ịme ya na obere ọsọ. Ikwesiri inwe ezigbo njikwa maka na ịchọrọ ịdị nro ma ịchọrọ ịkpachara anya.
JAMIE ROBINSON: Echere m, enwere m enyi na-aga ọrụ kwa ụbọchị na ọ na-ekwu na ọ gbanye Netflix na ọkụ mbụ. Ọ na-elekwa ihe nkiri mgbe ọ na-aga ọrụ. Ihe a juru m anya.
Echere m ihe? O wee sị, ọfụma, okporo ụzọ ahụ adịghị mma. Kedu ihe m kwesịrị ịme ma ọ bụghị? Ikechukwu Ọ dịkwa m ka nke ahụ, ị ​​ga-enwetara onwe gị ọgba tum tum.
Ikwesiri ime nke ahụ. Ma anyị kwesịrị ibu ọrụ. Mgbe anyị na-etinye okpu agha anyị, enwere ọtụtụ ndị nọ ebe ahụ na-adịghị a attentiona ntị na 100% nke oge. WES SILER: Ikpe ikpe Lane ka mma.
E gosipụtara ya na ọnụ ọgụgụ, ọ bụghị ya? Nkewa Lane na-ebelata mkpọchi okporo ụzọ maka onye ọ bụla gụnyere ndị ọkwọ ụgbọ ala. Ọ bụ ihe ezi uche, bara uru, na nchekwa maka ndị ọgbatumtum. Steeti ndị ọzọ nke America kwesịrị ikwe.
Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ịmụ ka esi eme ya n'enweghị nsogbu. Flag HARLAN: Otu esi egbochi ọnọdụ ndị dị ize ndụ. Es na-enye ha ikike ịchịkwa ọnọdụ ahụ.
Ọ na-egbochi ha ịbụ naanị ihe na-adịghị ike n'ime osimiri nke ụgbọ ala. JAMIE ROBINSON: Ekwenyere m kpamkpam. Ma mgbe ọzọ ị na-agba ọgba tum tum gburugburu ụwa ma hụ ka ndị mmadụ na ndị ọgba tum tum na-arụ ọrụ nke ọma gburugburu ụwa na otu anyị si agafe okporo ụzọ ugbu a, ọkachasị n'obodo ndị mmadụ juru, ọ na-ebelata mkpọchi ndị ahụ nke ukwuu.
Echere m, ọ bụ ikuku, alm ost, ma anyị nwere nnukwu okporo ụzọ ebe a na America. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhapụ ya na steeti ndị ọzọ, ahụrụ m nke ahụ dị ka ihe dị mma nye anyị - WES SILER: Eleghị anya ị ga-ahapụ ụfọdụ n'ime ndị a gafere. JAMIE ROBINSON: Ọ bụ ebe a ga - azọpụta ọtụtụ ndụ, ejiri m nke ahụ.
Kedu ihe 13 pụtara na ụwa biker?
Iri na atọ''13'- Common patch eyi site' Outlaw 'igwe kwụ otu ebe. Nwere ike ịnwe ọtụtụ nkọwa. Kacha nkịtị ẹkenịmdepụtaraọ bụ ịbụ13thleta nke mkpụrụedemede 'M' na-anọchi anya Marijuana ma ọ bụ Meth. A makwaara na ọ ga-eguzo maka isi mbụ ma ọ bụ 'nne' nke M / C.Dec 7 2018
Kedu ihe bụ ịgba ọsọ na ịgba ịnyịnya ígwè?
Ọtụtụ ìgwèna-agba ịnyịnyabụ “enweghị njem ọ bụla”. Nke a bụnọkwasiebeeọ bụghịotu onye ga-ahapu n’azụ ma ọ bụrụ na onye na-agba ya enweghị ike ijide ijeụkwụ ya maọbụ ọ bụrụ na ha nwere igwe arụ ma ọ bụ nke dara ada.
M̀ kwesịrị isonyere ndị otu ịgba ịnyịnya ígwè?
Enwere ọtụtụ elele naisonyerekaotu. Ndị na-agba ịnyịnya na-egosipụta oke mmetụta nke ịrụkọ ọrụ ọnụ dị ka ọla edoìgwèna ọkwa ọ bụla. Na mgbakwunye, ịbụ akụkụ nke aotubụ ụzọ dị mma iji chekwaa otu ndị gbara gị gburugburu nke nwere ọtụtụ ebumnuche na ụkpụrụ ị nwere.
Ọ bara uru ịbanye na klọb ịgba ịnyịnya?
Na-esonyekaklọbbụ ụzọ dị mma iji nweta ọtụtụ ihe na nke gịịgba ígwè. Ma ị bụ onye na-agba ọsọ oge ma ọ bụ onye mbido zuru oke, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịnya ịnyịnya nwere otu uchendị na-agba ịnyịnya ígwèịzụlite nkà gị ma maa onwe gị aka. Kpukpruklọbawade pụrụ iche ahụmahụ nkeịgba ígwè.June 7. 2012 r.
Kedu ihe ị na-eme na ịgba ịnyịnya ígwè?
Ọsọ na-agba ọsọklọbga-enwe nkuzi na nkuzi nkuzi nke ga enyere akagịnwee ahụ ike zuru okegịegbula onye ọ bụla n’azụ, ma wulite nkà iji meeigwe kwụ otu ebema guzosie ike n'enweghị nsogbu ọ bụla n'agbanyeghịgị'Ọ fọrọ nke nta ka gị na ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na-emetụ aka.bọchị 2020
Kedu ka ndi igwe igwe si ekwu ndewoo?
Aha maka ekele a gụnyere 'Biker wave', 'Cycgbọalaefe ','Ọgba tum tum-egharị 'ma ọ bụ nanị' The Wave. ' Ekele ahụ nwere ike ịgụnye ọtụtụ mmegharị gụnyere ikwe n'isi, mkpịsị aka aka, akara aka V, ma ọ bụ aka aka.
Kedu ihe FTW pụtara maka ndị na-agba ígwè?
Ọfọn, enwere ọtụtụ nkọwa maka ụdị dị mkpirikpiFTW. Otú ọ dị, nabikerịsụ asụsụ ya a na-apụtakarị dị ka. 1. Ruo Mgbe Ebighị Ebi abụọ.Sep 13 2018